NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် "Bosch ရဲ့" (ဆောင်းပါး3၏ 3) ၏မျှော်နှင့်အသံ
Home » အသားပေး » "Bosch ရဲ့" (ဆောင်းပါး3၏ 3) ၏မျှော်နှင့်အသံ
"Bosch ရဲ့" (ဆောင်းပါး3၏ 3) ၏မျှော်နှင့်အသံ
၏တစ်ဦးကနောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းတစ်ခုဓာတ်ပုံကို Bosch ရဲ့ Connelly ၏ညာဘက်မှစာရေးဆရာမိုက်ကယ် Connelly ရှင်းမှဒုတိယ-လက်ဝဲ-မှထုတ်လုပ်သူ-စာရေးဆရာတွမ် Bernardo နှင့်အတူအမှုထမ်း။ (ဦးထုပ်၌) အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ Pieter ဇန်နဝါရီ Brugge နောက်ခံ Connolly နောက်ကွယ်မှတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစီးရီးအတွက်ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုဆောင်းပါးများကိုအမေဇုံချုပ်ဗီဒီယိုရဲ့ပေးသောဒါရိုက်တာများနှင့်ရိုက်ကူးရေး၏ပံ့ပိုးမှုများကိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက် Bosch ရဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးင်း၏ထူးခြားတဲ့မှောင်မိုက်, gritty ကြည့်။ (အဆိုပါစီးရီးကိုလည်းပြပွဲတခုတခုအပေါ်မှာအလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူသူသည်မိုက်ကယ် Connelly ကစုံထောက်ဝတ္ထုအပေါ်အခြေခံသည်။ ) ဒီနောက်ဆုံးအရစ်ကျခုနှစ်, ငါ 'ဆိုတဲ့စီးရီးနဲ့စတင်ပြီး၎င်း၏ထူးခြားသောအသံသည်ကိုပြသပေးသူကိုအနုပညာရှင်တွေစကားပြောပါလိမ့်မယ် ဂီတတေးရေးဆရာယေရှဲ Voccia ။
များအတွက်ဂီတ Bosch ရဲ့ စီးရီးကိုပြောပြပုံပြင်များ၏မှောင်မိုက်, စိတ်လှုပ်ရှားမှု-Charge လေထုရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ယခင်က 60 feature ကိုရုပ်ရှင်ကျော်အပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးသူကို Voccia, ကြောင်းစိန်ခေါ်မှုမှတက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူဟာစီးရီး '' ဖန်တီးမှုအဖွဲ့ပူးပေါင်းဘယ်လိုပြောတယ်။ "ငါသည်ကျွန်တော်တစ်ဦးအချိန်အကြပ်အတည်း၏နည်းနည်းအောက်မှာ ရှိ. လေယာဉ်မှူးအပေါ်ပူးပေါင်းတဲ့အခါမှာ" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "ကျနော်တို့ဂီတ၏စတိုင်လ်ဒီဇိုင်းပြီးတော့မြေတပြင်လုံးဇာတ်လမ်းတွဲဂိုးသွင်းဖို့အကြောင်းခြောက်ရက်ပတ်လုံးရှိခဲ့ပါတယ်။ Show ကိုပြေးသမားအဲရစ် Overmyer နှင့်ထုတ်လုပ်သူ Pieter ဇန်နဝါရီ Brugge ငါ၏အစတူဒီယိုမှကိုကျော်တို့သည် လာ. ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းကိုသူတို့အားဂန္ဆွေးနွေးမှုများရှိခဲ့ Bosch ရဲ့ ဂီတလေထုတူခံစားသင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ LA ကအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောရပ်ကွက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောနှင့်မည်သို့သူတို့အချိန်ကျော်ရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီရှိုးအတွက်ပုံဖော်ခဲ့သည်အခြားရုပ်ရှင်, ဂီတ, နှင့်စာအုပ်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပြောဆိုသော။ ပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေးကနေ, ကသူတို့ရမှတ်တစ်ဦးရိုးရာ melodic ဆောင်ပုဒ် type ကိုမလိုချင်ခဲ့ဘူးကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကလိုချင် Bosch ရဲ့ ဂီတထည်တစ်ဦးထက်ပိုသောပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ် Impressionist အမျိုးအစားရှိသည်။ အဆိုပါဂီတပြည်တွင်းရေးရုန်းကန်မှုများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များထက်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိမြင်နိုင်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမှချည်ထားသောမည်ဖြစ်သည်။
'' ကျွန်မရက်အနည်းငယ် သွား. ပထမဦးဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲများ၏ရမှတ်အများစုအတူတက်ရောက်လေ၏။ ကံကောင်းတာကငါ့အဘို့, သူတို့ကချစ်တော်မူ၏။ သူတို့လိုခငျြသိနှင့်ကျွန်တော့်အကြောင်းပြောဆိုရန်အချိန်ကိုလုယူသောကြောင့်, လုပ်ငန်းစဉ်လွယ်ကူသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါထို့နောက်ပြပွဲများအတွက်ညာဘက်ချဉ်းကပ်မှုကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့တယ်။ အတော်ကြာရာသီပြီးနောက်ကျွန်တော်ဂီတအကြောင်းကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြီးမြတ်စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ အဆိုပါပြပွဲဖွင့်ဇာတ်ကောင်တွေအများကြီးမှတဆင့်စိုက်ပျိုးနှင့်ကြပြီ။ ယခုကြှနျုပျတို့ဂီတဆွေးနွေးရန်တစ်စမှတ်အဖြစ်ကနေဆွဲရန်ဤမျှလောက်များစွာသောအတွေ့အကြုံများနှင့် Adventures ရှိသည်။ "
Bosch ရဲ့သူအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရဲ့အခြားစီမံကိန်းများနှင့်ကင်းသတ်မှတ်အဘယ်သို့သောအကြောင်းမေးတဲ့အခါ, Voccia ထွက်ခုန်သောပထမဦးဆုံးအရာက "တုန့်ပြန် '' underscore ၏တရားမျှတမှုလျှောက်လွှာ။ ' တစ်ခုချင်းစီရာသီ Bosch ရဲ့ အလွန်အခန်းကြီးအတူစာအုပ်ထက်ဖြစ်စဉ်များတစ်စီးရီးကဲ့သို့ဖြစ်၏။ နည်းလမ်းတွေအများကြီးအတွက်ကြောင့် 10 နာရီရုပ်ရှင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကို '' အသေးစိတျ '' တစ်ဦးအတော်လေးမြင့်မားတဲ့အချိုးအစားအတွက်ဇာတ်လမ်းပြောပြအတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပြုသည် '' တိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်။ '
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Episode မူဘောင်အတွင်းမှာပဲဒီဇာတ်ကောင်များနှင့်ဆက်ဆံရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်အချိန်အထိလွှတ်ပေးခြင်း။ ဒါဟာအစသမားရိုးကျနှင့်တာဝန် '' လူသတ်မှုစုံထောက်အမျိုးအစား '' ဂီတအချိန်လေးအများအပြား sidestep ငါမခေါ်တစ်ခုခုကိုဖန်တီးရန်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြု '' Bosch ရဲ့ Burn ။ ' ဇာတ်လမ်းပြတ်တောက်ခြင်းနှင့်တင်းမာမှုမပါဘဲစီးဆင်းသည့်အခါအဆိုပါမီးလောင်နေသူများကဖန်တီးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ရုတ်တရက်မြင့်သရုပ်မှန်နှင့်ဇာတ်ကောင်ရဲ့အခြေအနေများ၏အသိအမြင်နှင့်တည်နေရာ၏အဓိပ္ပာယ်လည်းမရှိ။ ဂီတညီမျှခြင်းထည့်သွင်းသောအခါမကြာခဏဆိုသလိုဒီ built-တက်တင်းမာမှုလွှတ်ပေးရန်နှင့်ကဗျာသို့စကားပြေကနေဇာတ်လမ်းပြောပြ mode ကိုရွှေ့ဖို့တဲ့သဘောထားကိုရှိပါတယ်။ ပြပွဲအပေါ်မှာငါ့အဓိကစိန်ခေါ်မှုများတစ်ခုမှာ, ဒရာမာနှင့်အတူဂီတ join ကြောင့်အပိုဆောင်းစိတ်ခံစားမှုအတိုင်းအတာသို့မဟုတ်ဇာတ်လမ်းပြောပြ function ကိုများကိုပေးစွမ်းထွက်ရဆဲမီးလောင်ထိန်းသိမ်းထားဖို့မည်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။ Bosch ရဲ့ တစ်ဦးပြပွဲ မှစ. ကြိတ်နှင့်လောင်းကြေးအပေါ်နှိမ့်ချနှစ်ဆတစ်ခု idiosyncratic လမ်းရှိပါတယ်အဖြစ်။ မဟုတ်ဘဲသူတို့အထူထောင်သမားရိုးကျနည်းလမ်းတွေထက်စဉ်းစားဟန်တမင် applications များအတွက်ဂီတအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့အမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုခုကိုယူဆောင်လာရန်တတ်နိုင်ကြသည်။ အတွေးတစ်တွေအများကြီးဂီတစတင်သည်နှင့်ပေါ်ရပ်ရှိရာသို့ဝင် Bosch ရဲ့။ "
ငါအဘို့အသူ့ရဲ့ဂီတကိုနားထောင်နေစဉ်, ထို Voccia မှဖော်ပြခဲ့တဲ့ Bosch ရဲ့ငါဘား Herrmann နှင့်အထူးသဖြင့်ညှို့၏အသုံးပြုမှုအတွက်ဂျွန် Barry ငါ့ကိုသတိပေးအခြားကျမ်းပိုဒ်များအပိုင်းဆင်တူကြားဖူးတယ်။ အဲဒီနှစျခုအထင်ကရရုပ်ရှင်တေးရေးမိမိအလုပ်တခုတခုအပေါ်မှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်လျှင်ငါမေးတယ်။ "လုံးဝ!" Voccia ဟုလျှောက်ကြ၏။ "ဟုအဆိုပါ Hitchcock ဇာတ်ကားအဘို့ဘား Herrmann ရဲ့ရမှတ်ကိုတက်ကြီးထွားလာငါ့အပေါ်မှာကျနော်တို့မှာအများကြီးသြဇာရှိကြ၏။ တက္ကစီယာဉ်မောင်း, ဖာရင်ဟိုက် 451နှင့် Vertigo ငါ၏အဂီတမှတ်ဉာဏ်အတွက်အတော်လေးမကြာခဏတက်လာကြ၏။ မိမိအခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ထပ်တလဲလဲလုပ်ကွက်၏ Hermann ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့်သူ၏ Unorthodox ensembles နှင့် orchestral အတောမသတ်ဖှယျဖြစ်ကြသည်။ '' ဟောင်းကပြောပါတယ်သူ၏ဂီတတစ်ခု Vibe လည်းရှိပါသည် ဟောလိဝုဒ်'' ငါ့ကိုငါတစ်ခါတစ်ရံတွင်စအချို့ကိုထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားဘို့မည်သူမျှမယ့်လမ်းအတွက် Bosch ရဲ့ ယင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကို grounding ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် Los Angeles မြို့/ဟောလိဝုဒ် ပတ်ဝန်းကျင်။
"ယောဟနျ Barry, ငါ၏လူငယ်သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ ငါဆိအဖြစ်ဂျိမ်းစ်ဘွန်းငျကိုးကှယျနဲ့ကျွန်မအကြိမ်သူတို့အားဇာတ်ကားရာပေါင်းများစွာစောင့်ကြည့်ပါတယ်။ ငါတကယ်ငါ့ကိုတယ်ဘယ်အရာကိုရေးသားခြင်းသည်သူ၏ string ကိုကိုချစ်သလောက်မိမိအ woodwind နှင့် Vibe ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့အကြိုက်ဆုံးရွေ့လျားတစ်ခုမှာသူသည်သင်တို့ကိုရုတ်တရက်မှောင်မိုက်လမ်းကြားချ, ဒါမှမဟုတ်သုညဆွဲငင်အားသို့ရေအောက်သွားခဲ့ကြသည်ဖြစ်စေ, ချက်ချင်းလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဤလောကသို့သငျသညျ drop နိုင်လမ်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
"ကျွန်မရုပ်ရှင်တေးရေးသူတို့တွင်ယောဟနျသဝီလျံနှင့်ဂျယ်ရီရွှေပန်းထိမ်နှင့်အတူသွားကျောက်ခဲအရာ vs. Beatles ၏တစ်ဦးစီရှိပါတယ်ထင်ပါတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါရေးအဖွဲ့သမားအပေါ်ခိုင်မြဲစွာခဲ့ကြပြီ။ တရုတ်တန်း အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးဆွေးနွေးမှုဟာကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် Bosch ရဲ့ ငါတကယ်ကကျော်ဆည်းပူးဖူးဘူး။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်ငါကိရိယာ, လေထုနှင့်အခြားနည်းနည်းထိထဲမှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုတချို့အတွက်အလုပ်မလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ တရုတ်တန်း မူလကမှန်ကန်သောရမှတ်လူတိုင်းကမုန်းကြတဲ့ကာလရှိခဲ့ပါတယ်။ သွန်းတစ်ဦးရက်စက်စွာအမြန် rescore နှင့်အတူ လာ. ဒါရဲရင့်ခြင်းနှင့်သမားရိုးကျမဟုတ်သောအရာတစ်ခုခုကိုပြုလေ၏။ ကျွန်မရေးဖို့ထိုင်အခါတိုင်းငါနှင့်အတူအကြောင်းသင်ခန်းစာသယ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားပါ။
"ကျွန်မထင်ငါ့ကိုအပေါ်ကြီးမားတဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်ကြောင်းနောက်ထပ်တေးရေးဆရာထဲမှာဖွင့်ပြသ Bosch ရဲ့ ဂီတတိုရူ Takemitsu ဖြစ်ပါတယ်။ '' ကြမ်းတမ်းချောမွေ့ '' ဂီတဒြပ်စင်များနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အသံနှင့်အတူဂီတ၏ blending မိမိပေါင်းစပ်ငါပြပွဲအပေါ်မကြာခဏအသုံးပြုသင်ခန်းစာများဖြစ်ကြသည်။ မိမိအရုပ်ရှင်တွေအကဲခတ်ငါနေဆဲသူဇာတ်လမ်းကိုပြရန်မှတဆင့်အသင်းသားများဟာ webs အားဖြင့် hypnotized နေပါတယ်။ ရိုးရာဂျပန်ဂီတနှင့်အတူပြင်သစ် Impressionist သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမိမိပေါင်းစပ်ငါ့ထံသို့လုံးဝတွန်းလှန်သည်။ ဒါ့အပြင်သူ့ရဲ့ဂီတ၏နေရာချထား, Entries တွေကိုနှင့်ထွက်ပေါက်ဂီတကိုယ်တိုင်ကသကဲ့သို့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှိပါတယ်။ "
ငါသည်လည်းငါပေါ်ရှိအခြားအနုပညာရှင်တွေ '' အသံသွင်းမိမိအသုံးပြုအထင်ကြီးခဲ့ Voccia ပြောသည် Bosch ရဲ့။ နှစ်ခုရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံထောက်သူမ၏သားအသတ်ခံတွေ့သောအကြောင်းကြားရန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါငါအထူးသဖှယျခဲ့သည်ထင်ဂီတပူးတှဲတစျခုမှာနည်းနည်း, အဇာတ်လမ်းတွဲ "ဟုအဆိုပါတံတားအောက်မှာသွေး" (ရာသီ 3, ဇာတ်လမ်းတွဲ 5) ၏အစအဦး၌ရှိ၏။ မြင်ကွင်းများ၏ချာလီ Haden ရဲ့ Melancholie မှတ်တမ်းတင်ဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ် "မူလစာမျက်နှာ Going ။ " ငါလာသောအခါအဘယ်မှာသည်သူ၏ရမှတ်များအတွက်လက်ရှိအသံသွင်းသုံးစွဲဖို့သူဆုံးဖြတ်သည်ဘယ်လို Voccia မေးတယ်။ "ဒါက 100% မိုက်ကယ် Connelly ဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ "သူကဂျက်ဇ်ဂီတ၏နက်ရှိုင်းတဲ့မေတ္တာနှင့်အသိပညာရှိပါတယ်။ သူကပင် saxophonist ဖရန့်မော်ဂန်အကြောင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ကိုခေါ်လုပ် ရွေးနှုတ်ခြင်း၏အသံ။ မိုက်ကယ် Connelly ရာ, jazz အယ်လ်ဘမ်အပေါ် Bushi-ဆံပင်လေးတွေအဟောင်းရုပ်ရှင်များတွင်ဘေ့စ်ဘော stats သိသောလမ်းကိုကစားသူကိုသိတယ်။ ပြပွဲအတွက်ဂီတရွေးချယ်မှုတစ်ခုတွေအများကြီးအမှန်တကယ်ညာဘက်ကသူ့စာအုပ်တွေထဲကလာကြ၏။ ဟယ်ရီ Bosch ရဲ့ကြီးမားတဲ့, jazz ချစ်မြတ်နိုးတဲ့နှင့်စာအုပ်များအတွက်အချို့သောသီချင်းများ၏တိကျသောစိတျအပိုငျးမှမကြာခဏကိုးကားရှိပါတယ်။
"ဒါဟာပြပွဲငါ့အကြိုက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အစစ်အမှန်မှတ်တမ်းများသုံးစွဲဖို့ get ဒါကျေးဇူးတင်တယ်။ ဒါနွေးနဲ့ညားပြီးရှုပ်ထွေးကြောင်းတစ်ခုလေထုဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒါဿုံဟယ်ရီ Bosch ရဲ့ဖော်ပြနှင့်သူ၏ဇာတ်ကောင်များနှင့်ခြုံငုံပြပွဲမှဤမျှလောက်နက်ရှိုင်းဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒါဟာအစငါဖန်ဆင်းဂီတတစ်ခု counterpoint အဖြစ်သင်တန်းပေါ်မှာငါ့ကိုစောင့်ရှောက်တကယ်ကူညီပေးသည်။ အဆိုပါဖို့အတွက် Titans တွေကကဲ့သို့တူညီသောဘောင်အတွင်းဖြစ်ခြင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံကျွန်မကိုလည်းဂီတပညာရှင်သူသည်ငါ့ညီ, ငါ့ကိုပဌနာ, ငါဘာလုပ်နေကြငါ "ဟုပြောလိမ့်မည်နည်း အိုးဘာမျှမ ... ယ့်အချို့ထဲကလာမယ့်သော cue ရေးသားခြင်း Coltrane! "
Voccia သူ့ရဲ့ဂီတမှတ်တမ်းတင်၏ mechanics ရဲ့အပေါ်အသေးစိတ်သို့သွားလေ၏။ "တွင် Bosch ရဲ့ နှင့်ငါ့ရမှတ်များအများစုအပေါ်ငါတံပိုးအစိတ်အပိုင်းများ မှလွဲ. တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် play "ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "ကို virtual မှအစစ်အမှန်မှတ်တမ်းတင်ထားသောတူရိယာ၏အမှန်တကယ်ရောနှော 60 / 40 အကြောင်းပါ။ ငါသည်လည်းအင်ဂျင်နီယာနှင့်ရောစပ်သူအပေါင်းတို့လုပ်ပါ။ ငါဂီတကစားကိုချစ်နဲ့ကျွန်မအင်ဂျင်နီယာကိုချစ်။
"မော်နီတာသည်, ငါသည် PMC IB1s, Genelec 1030s နှင့်အချို့သောအလွန်သေးငယ်သော Auratone စပီကာကိုသုံးပါ။ လုနီးပါးအရာအားလုံးကိုနှစ်ခု UA Apollo interfaces သို့ Bootsy Mod နှင့်အတူ BAE 1084 preamps တရံမှတဆင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသောရောက်လာပါတယ်။ အဆိုပါအာပေါလုတစျခုမှာမှတ်တမ်းတင်ဘို့ဖြစ်၏နှင့်အခြားနှောင်းပိုင်း 70s နှင့်နှစ်လယ်ပိုင်း 80s ကနေပဲ့ချိတ် signal ကိုပရိုဆက်ဆာငါ၏စုဆောင်းခြင်းများအတွက် patchbay အဖြစ် setup ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ငါ Korg SDD-3000 တစ် Roland RE-201 အာကာသ: Echo တစ်အဘိဓာန် PCM60, 70 & 80 ရှိသည်, aux ဒစ်ဂျစ်တယ် performance ကနေပို့ပေးအဖြစ်ညဦး H3000 တက်ထားကြ၏။ အဆိုပါလျှို့ဝှက်လက်နက်သော်လည်း 93 ကနေအဘိဓာန်ချုပ်အချိန် 1979 ဖြစ်ပါတယ်။ ငါနှောင့်နှေးမှတ်ဉာဏ်၎င်း၏ဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ 256ms နှင့်အတူလှပသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်နမူနာများအားလုံးအမြိုးမြိုးကိုဖနျတီးဖို့ကသုံးပါ။ ငါ့ထံသို့ကြောင့်အစဉ်အဆက်ကိုဒီဇိုင်းပဲ့ချိတ် signal ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများအများဆုံးဂီတအပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနှောင့်နှေးခြင်းထက်လက်နက်ပိုဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာကျနော် preamps, Compressor, EQs နှင့်ထူးဆန်းဖဲကြိုးမိုက်ခရိုဖုန်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုကောက်ယူကြပါပြီဒါကြောင့် "ငါတကယ်, အင်ဂျင်နီယာပျော်မွေ့။ ငါ့အဘို့, အသံ၏အရောင်ကိုမကြာခဏအမှန်တကယ်မှတ်စုထက်ပိုစိတ်ခံစားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်လက်ျာအသံသည်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်, မှတ်စုအဘယ်သူအားမျှညာဘက်ခံစားရပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ညာဘက်သေံအတူမှတ်စုရုံသငျသညျမှာအထဲကခုန်များနှင့်ဂီတသူ့ဟာသူရေးသားစတင်သည်။ ငါသည်လည်းငါ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမျိုးမျိုးသော VCOs နှင့်အတူအသံအရင်းအမြစ်အဖြစ်ပေမယ့်အများအားဖြင့်ပြင်ပဆစ်ဂနယ်ဧရိယာအဖြစ်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အသုံးပြုသည့်ရစေရန် '' ထိန်းချုပ်မှုထဲက '' modular ဆင့်ခ်ခွအေနကေိုရှိသည်။ ဒါဟာပျော်စရာတွေအများကြီးပါပဲ။ ငါ့ထံသို့ modular ဆင့်ခ်စင်ကြယ်သောစိတ်ကူးမီးစက်ဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်သစ်ကို module တွေကိုဤမျှလောက်များစွာသောတောက်ပဒီဇိုင်နာများနှင့်အတူရွှေခေတ်အတွက်အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာဖန်တီးမှုခဏကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်မှလွှဲရန်နှင့်ကြောင်း primal အလိုလိုသိပရမ်းပတာအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရရပြန်အားသွင်းနေသည်။
"အကောင်းဆုံးကတော့ငါရမှတ်များတွင်အသုံးပြုစေခြင်းငှါအသီးအသီးစီမံကိန်းကိုစုရုံးအသံများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရဲ့ start မှာငါလုပ်နိုင်သလောက်အချိန်ဖြုန်းဖို့ကြိုက်တယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါကြောင်းလက်မှတ်သံကိုရှာနေပါတယ်။ တခါတရံသူကတစ်ခါတစ်ရံငါ Reaktor အတွက်လုပ်အသစ်တစ်ခုကို virtual တူရိယာသို့မဟုတ်ငါဆင့်ခ်ဖန်တီးရလာဒ်ကဒိတစ်ဘဏ်ဖြစ်ပါတယ် '', ထိုခံစားချက် '' ဖန်တီးမယ့် signal ကိုကွင်းဆက်ဖြစ်ပါသည်။ တခါတရံကိုယ့်ကိုယ့်လက်ျာဘက်မိုက်ကရိုဖုန်းနှင့်အတူမှတ်တမ်းတင်ထားသော ebay မှာတယ်အဲဂုတ္တုပြည်၌နေ 15-တျြောတယောဖြစ်၏။ "
ဒီစီးရီးအတွက်ပထမဦးဆုံးဆောင်းပါးမှာတော့ဒါရိုက်တာလော်ရာ Belsey စီးရီး " 'အံ့သြဖွယ်" တည်နေရာပစ်ခတ်မှု၏စကားပြောသည့်အခါဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအဘို့အဦးစီးဌာနအသံထွက်ဒေါ်ခင်မျိုးသက်ကတင်ပြထားပါတယ်။ "ကျွန်မအသံကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာများတွင်အချို့ခဲ့ကြသည်ဘယ်လောက်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဆူညံစဉ်းစားဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ဘယ်လောက်ကောင်းမှာအံ့သြသွားတယ်" ဟုသူမကဆိုသည်။
ကြောင်းဦးစီးဌာန၏အဓိကအဖွဲ့ဝင် Belsey ရည်ညွှန်းခဲ့အခက်အခဲများအပေါ်အသေးစိတ်ရှင်းလင်းသူကိုသံကိုရောနှောဖြစ်သူ Scott Harber, CSA ဖြစ်ပါသည်။ "ယေဘုယျအားဖြင့်အလုပ်ရှုပ်လမ်းများပေါ်နှင့်ကမ္ဘာ၌မစင်ကြယ်ပေးတဲ့ dialog ရယူခြင်းကျနော်တို့မကြာခဏအပေါ်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်ပါတယ် Bosch ရဲ့"ဟုသူကပြောတယ်။ "တည်နေရာပေါ်ရိုက်ကူးအားလုံးဘဏ်ဍာလိုပဲကျနော်တို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအရာကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ကြေးနန်းစကားတော်နှင့်အဇာတ်လမ်းကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟု Post-ထုတ်လုပ်မှုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအစိုင်အခဲပေးတဲ့ dialog ပုဒ်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ကျနော်တို့အသွားအလာထိန်းချုပ်အဖြစ်ကြိုးမဲ့ MICS ၏လစ်ဘရယ်အသုံးပြုမှုနဲ့တူပြင်ပနည်းလမ်းများနှင့်အတူဤလုပ်ပါ။ ထို့အပြင်ကင်မရာဌာနများ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိခြင်းလွန်ကဲကဲကအရေးကြီးတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကတစ်ချိန်တည်းမှာကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်တင်းကျပ်စွာမျက်ကပ်မှန်ရိုက်ကူးဖို့ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ရှောငျလှဲနိုငျသညျ။ ဒါဟာတဦးတည်းကိုမြင်သောအရာကိုမှတန်ပြန်အသံတစ်ခုတင်းကျပ်စွာ, နီးကပ်စွာ-miced သရုပ်ဆောင်ရဲ့ lavalier ကြားနာနေစဉ်ကျယ်ပြန့်ရိုက်ချက်ကိုမြင်လျှင်များ၏မကြာခဏ-ကိုကြားပြဿနာကာကွယ်ပေးသည်။ ဓါတ်ပုံပညာ၏ပြပွဲရဲ့ဒါရိုက်တာ၏အကူအညီမပါဘဲ, ဒီမဆိုအဆင့်တွင်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့နှင့်ပက်ထရစ် Cady နှင့်မိုက်ကယ် McDonough ဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြ၏ Total နှင့်ရည်မှန်းချက်နားလည်ပါတယ်။
"ဟုအဆိုပါစနစ်၏အဆိုပါ core ကိုဒီရက်လုပ်ငန်းစဉ် လုပ်. အလွန်အမင်း, လျင်မြန်သွက်လက်ကြံ့ခိုင်ခြင်း, Sonic အလျှော့အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်သူမတူနိုင်တဲ့ Aaton Cantar X3 အသံဖမ်းပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါအသံနဲ့အမြတ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာငါ့ကိုပိုပြီးအင်တိုက်အားတိုက်နဲ့ပိုပူလာအောင်လုပ်နေတယ် post ကိုသိမွငျကွားမှကိုခစျြသောအတိတ်ကာလထက်ရောနှောဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါပြီ။ ဒါ့အပြင်ငါဘက်ပေါင်းစုံ metadata ကိုကွင်းဆက်အဖြစ်မြေတပြင်လုံး system ကိုတညျဆောကျနိုငျသညျအဆိုပါအလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လမ်းကိုခစျြ။ ကျနော်တို့ခုလုံးမဲမှောငျအဖြစ်ကျနော်တို့ DPA 4071 သို့မဟုတ် 6061 MICS နှင့်အတူဝါယာကြိုးသူကိုသရုပ်ဆောင်များကိုများအတွက် Lectrosonics ကြိုးမဲ့စနစ်များကိုအသုံးပြုပါ။ အဆိုပါ DPAs ကျနော်တို့ကြုံတွေ့ရရှိသမျှတို့သည်အမျိုးမျိုးသောဗီရိုထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စန်း MICS နှင့်ရေနံတူးစင်ကောင်းကောင်းနှင့်အတူကောင်းစွာရောမွှေပါ။ အဆိုပါစန်းထမ်းဘိုးတွင်ကျနော်တို့လိုအပ်ကြောင်းပေါ် မူတည်. ပိုပြီးဆွဲဘို့ Sennheiser MKH 50s, Schoeps CMIT ရဲ့, ဒါမှမဟုတ် Sanken CS3e ရဲ့သုံးစွဲဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ "
၏ပရိသတ်များ Bosch ရဲ့ စီးရီးပြီးသားတစ်ဦးဆဋ္ဌရာသီအတွက်သက်တမ်းတိုးခဲ့ပြီးသိရပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မည်။ တစ်ဦးအတွက် အဆိုပါ Tampa Bay က Times သတင်းစာနှင့်အတူအင်တာဗျူးဒီဧပြီ, Connelly လာမည့်ရာသီသည်သူ၏ 2007 ဝတ္ထုပေါ်တွင်အခြေခံလိမ့်မည်ကြောင်းထင်ရှား အဆိုပါလျစ်လျူရှုဒါပေမယ့်သူအချို့ updates များကိုအတူ "ကဆက်ပြောသည်။ ဒါဟာအကြမ်းဖက်ဝါဒအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်; ယခုပြည်တွင်းအကြမ်းဖက်ဝါဒပါဝငျသညျ။ "ဒါ့အပြင် Connelly ရဲ့လတ်တလော Bosch ရဲ့ဝတ္ထုထဲကနေတချို့ဒြပ်စင်ရှိလိမ့်မည် အမှောင်မွငျ့မွတျညဟယ်ရီဧလိရှဗက် Clayton (ဂျေမီအန်း Allman), တစ်ဦးတရားမဝင်တွေဆီကနေမှလျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်မယ့်အနေဖြင့်သူကြုံတွေ့တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲများ၏ဆယ်ကျော်သက်သတို့သမီး၏အအေးကိစ္စတွင်လူသတ်မှုသို့ကြည့်မျှော်စတင်ခဲ့သောရာသီငါးရဲ့အဆုံးမှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီး storyline ၏တိုက်ရိုက်အဆက်ခဲ့ရသည် opioid ရက်ကက်။ ငါစိုးရိမျတရာသီကြောင်းဆဋ္ဌမမျှော်လင့် (နောက်ဆုံးနှင့်မျှော်လင့်မပါ) ဟုပြောသည့်အခါရှိသမျှတို့ကိုငါဟယ်ရီ Bosch ရဲ့ (နှင့်မိုက်ကယ် Connelly) ပရိသတ်တွေအတွက်စကားမပြောတတ်သေချာပါတယ်။
ဒီစီးရီး၏အစိတ်အပိုင်း 1 မြင်နိုင်ပါသည် ဒီမှာ နှင့်အပိုင်း2ဒီမှာ။ ငါတတ်နိုင်သမျှဆောင်းပါးများကိုဤအခန်းဆက်အောင်အတွက်သူမ၏တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအကူအညီတောင်းမဟာမိတ်များ Lee က, အမေဇုံချုပ်ဗီဒီယိုမှာအများပြည်သူခဲ, ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
"Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ်" (4 ပုဒ်မ 2) ၏ရာသီ2အတွင်းပိုင်း - သြဂုတ်လ 19, 2019
"Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ်" (4 ပုဒ်မ 1) ၏ရာသီ2အတွင်းပိုင်း - သြဂုတ်လ 16, 2019
အားလုံး၎င်း၏ခမ်းနားအတွက်ဘဝအသက်တာ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုရဲ့ "Serengeti" ဟုရီးရဲလ်စက်ဝိုင်း - ဇူလိုင်လ 22, 2019
အမေဇုံချုပ်ဗီဒီယို ဘားနတ် Herrmann Bosch ရဲ့ FOR-တစ်ဦးက FOR-A, မူကွဲစနစ်များ, ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ဂျယ်ရီရွှေပန်းထိမ် ယေရှဲ Voccia ယောဟနျသ Barry မိုက်ကယ် Connolly လှံ & Arrows တိုရူ Takemitsu တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် မူကွဲစနစ်များ	2019-06-13
ယခင်: ဇွန်လအစည်းအဝေးတွင် immersive VR ၏အနာဂတ် Explore မှ SMPTE ဟောလိဝုဒ်ပုဒ်မ
နောက်တစ်ခု: Danacoid InfoComm 2019 မှာဆီလီကွန်ဗယ်လီဌာနချုပ်၏ဖွင့်ပွဲနှင့်အတူအမေရိကန်စျေးကွက်သို့ချဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်